Inkqubo yoPhuculo- iZhongshan City YALIS Hardware Products Co, Ltd.
Ukusukela ngo-1990 i-YALIS Uyilo belusenziwa luphatha ucango kwimizi-mveliso yalo e-China apho yonke inkqubo yemveliso yenzeka khona. Uyilo lwe-YALIS sele ihambisa umnyango ophakamileyo ophakamileyo kumazwe ahlukeneyo. Ibisasaza umxholo we-YALIS wophawu kunye nokuphuhlisa iimveliso zayo, ukugcina isantya sentengiso ukuhlangabezana neemfuno zabathengi. Izixhobo zeminyango zangoku eziyilelwe e-China kwaye zenziwe zafikelela kwimigangatho ephezulu kakhulu yase China ukuba ithengiswe kwihlabathi liphela.
Ukusukela ngo-1990, uyilo lwe-YALIS luye lwalima iminyango yokuhambisa izixhobo zalapha e-Shangdong nakwamanye amaphondo ase China.
Ngo-2008, uphawu lwe-YALIS lusete. Sibeke iimveliso eziphezulu zokugqibela ngenjongo yesisombululo somnyango.
Ukusukela ngo-2009, i-YALIS ifumene isatifikethi solawulo lomgangatho we-ISO9001, isatifikethi se-SGS, isiqinisekiso seTUV kunye nesiqinisekiso se-EN.
Kwi-2014, ngokusekwe kwi-Italiyane eyaziwayo, i-YALIS yaqala ukuyila isiphatho somnyango we-alloy kwisitayile sangoku.
Ngo-2015, i-YALIS yaqala ukuseka kunye nokuhlakulela iqela le-R & D. I-YALIS yongeze ngokusemthethweni ukuphatha i-zinc alloy njengelayini entsha yemveliso.
Ngo-2016, i-YALIS 10 yoqobo yoyilo izibambo zeminyango zaziswa kwintengiso kwaye zafumana ilungelo lobunikazi. Kwaye i-YALIS ithathele ingqalelo ukuphuhlisa ulwakhiwo olutsha lokudibanisa nokudibanisa ngokulula.
Kwi-2017, ngenxa yebhetshi yokuqala yoyilo lwezibambo zoyilo zaxatyiswa emarikeni, ke i-YALIS yasungula ibhetshi yesibini yeminyango yoyilo emitsha kwimarike. Ngeli xesha, u-YALIS wenze umzamo omtsha kuyilo lwesiphatho somnyango: U-YALIS uzame ukudibanisa ukufaka kunye nokugqitywa okwahlukileyo kwisiphatho somnyango.
Ngo-2018, izibambo zeminyango ezigqityiweyo ezimnyama ezimnyama, isibambo somnyango wesikhumba, irosette ethe tyaba kubukhulu obu-5mm kunye nomqheba womnyango ngaphandle kweretsethi, ezi zinto zine ziye zeza emarikeni. Kwangelo xesha, u-YALIS waqala ukusasaza uphawu lwayo eYurophu.
Ngo-2019, i-YALIS iyalwazi utshintsho olwenzeka kwimarike, yiyo le nto yasungula izisombululo zeminyango eyenzelwe umnyango, kubandakanya isisombululo somnyango weglasi, isisombululo somnyango ngomthi, isisombululo somnyango wealuminium kunye nesisombululo somnyango wegumbi lomntwana.
Ngo-2020, Ukuze kuphuculwe amandla emveliso kunye nomgangatho wemveliso, umasifundisane wemveliso yeYALIS wazise inkqubo yolawulo lwe-ISO kunye nezixhobo zemveliso ezizenzekelayo, ezinje ngoomatshini bokucoca ngokuzenzekelayo, Umatshini woLawulo lweKhompyutha (CNC), oomatshini bokuphosa ngokuzenzekelayo, oomatshini bokupakisha ngokuzenzekelayo njalo njalo.